Xa umdlalo roulette Club, kufuneka ukujija ibhola phezu ivili apho 37 zokubeka. Ibhola zokumisa nawuphi na omnye zokubeka emva zokumiswa ivili. Injongo engundoqo somdlalo Isithebe ukuthelekelela kakuhle apho slot ibhola uya kuyeka. Ngokwenza oku, kwiinkalo kungazuzeka kwi esibondeni yakho. Ubungakanani Kumncede iyahluka kuhlobo isibonda kubekwa. Le yenye yezona umthengisi ephilileyo imidlalo itafile ehlabathini. KWIMIDLALO LIVE iqhosha NDIBANO kufuneka sikhetwe ukutshintsha itafile roulette okanye khetha ezinye umdlalo ezahlukileyo ezihlala. Iqhosha umthengisi Live ivumela wena ukuba udlale neminye imidlalo ezininzi ngexesha Gameplay.
Malunga umphuhlisi Club Blackjack
Lo mdlalo sinebhetri NetEnt. NetEnt ebesoloko usimisele ujongano kuphuculwa umsebenzisi abadlali zayo ukususela 1996. Impumelelo enkulu yenkampani kukuba imidlalo kuphuhliswa ngalo ezikhethekileyo ngokwenene kwaye kananjalo bonke imidlalo ziyafikeleleka naphi na, nanini na - mobile, ukuthengisa okanye desktop - nto leyo evumela ukuba uxhamle ubukho lishishini multi-itshaneli.
Sele kufuneka liqhelane kakuhle ubuninzi itafile imidlalo zombini lizwe kunye namashishini Casino online. Xa ukhetha ukudlala roulette Club, uya kuba ngamava taare ezweni esekelwe yekhasino.
Khetha isibonda olufanelekileyo esukela elinikiweyo ngokukhetha amasimi olufanelekileyo ukubheja kwitheyibhile umdlalo. I 'Ubhejo iyonke' window ibonisa bet iyonke. Uyakwazi ukuphinda ezibondeni zibekwe umdlalo yangaphambili ngokunqakraza phinda iqhosha. Ukuba ukhetha phinda iqhosha ukuze bet lomjikelo ophelileyo, ke wayeza kabini ubhejo. Uyakwazi ukubeka iintlobo ezininzi ozithembileyo phezu kwetafile roulette. Wonke uhlobo bet lugubungela uluhlu eyodwa lwamanani slot kwaye kwiinkalo ezithile ifunyenwe ngohlobo ngalunye esibondeni. Ibhodi iqulethe ngokweekholamu nezintlu ngaphandle apho kwiikholam abo 12 babalwayo iilayini ezinde kanti kwereyi le 3 imigca mfutshane babalwayo. Babeke ngaphakathi kulo mdlalo thebhule 1st iintlobo ezintlanu ngezibonda. Uyakwazi bhejele ngaphakathi phezu zokubeka ababalwayo. Babeke ngaphandle zokugqibela 3 iintlobo ozithembileyo kunye ungenza uwamise phezu iibhokisi eyodwa thaca ngezantsi.
roulette Club ithathwa njengokuba kumthengisi live umdlalo ofanelekileyo Blackjack kaJ NetEnt. Kwimizobo ezikumgangatho ophezulu ogqibeleleyo ujongano lomsebenzisi emangalisayo isibheno abaphulaphuli.